Indlu yegalari yentendelezo enendawo yokupaka yasimahla
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguIngrida
Indawo yethu yenye yezona ntendelezo zinika umdla kwisixeko saseKaunas. Isikwere sizaliswe ngemibala emihle kunye nobugcisa obukhethekileyo. Le ndlu ibekwe kumbindi weKaunas, kanye ecaleni kweFreedom avenue (Laisvės g.).
Kwindlu uya kufumana yonke into, onokuthi uyifune ngexesha lokuhlala. Iindwendwe ziya kuba nendawo yokungena eyahlukileyo kwaye zikwazi ukusela ikofu ngaphandle nje kwendlu. Ekhitshini uya kufumana yonke into yokupheka, ukwenza itiye okanye i-espresso. Ngeli xesha igumbi lokuhlambela lizaliswe zizinto zeshawa kunye neetawuli ezicocekileyo.
4.93 · Izimvo eziyi-181
Umbuki zindwendwe ngu- Ingrida
Ngexesha lokuhlala kwakho siya kukubonelela ngalo naluphi na ulwazi okanye uncedo onokulufuna ngesiLithuanian, isiNgesi, ipolishi kunye nesiRashiya.